Famerenam-bola eny amin’ny banky Sahirana ireo mpanao asa tena
Efa tena manomboka mahazo vahana ary mihalalina ny krizy aterak’ireo fepetra tsy maintsy ampiharina nohon’ny aretina coronavirus.
Miha-mitombo hatrany ireo olana sahirana amin’ny famerenam-bola eny amin’ny Banky sy ny orinasa mpampindram-bola madinika ireny, indrindra ny mpanao asa tena. Raha ny teo anivon’ny Orinasa mpampindram-bola madinika APEM-PAIQ (Association pour la Promotion des Entreprises à Madagascar- Programmes d’Appui aux Initiatives des Quartiers) dia nanambara ny tompon’andraikitra ny fitantanana, Rtoa Ravelonarivo Warda Sojnackie fa nihena 60% ny tahan’ny vola miverina tamin’ny Orinasa nohon’ny krizy ara-pahasalamana misy eto Madagasikara. Antony hoy izy ny tsy fandehanan’ ireo asa aman-draharaha amin’ny laoniny intsony. Voakasika mafy amin’izany ireo olona misehatra amin’ny asa madinika izay tena misedra olana ankehitriny. Maro amin’izy ireo no tsy mahatafaverina ara-potoana intsony ny vola tokony aloha ary misy mihitsy aza ny tsy mandoa intsony. Amin’izao fotoana izao dia nanapa-kevitra ny APEM-PAIQ fa haato aloha ny fampindramam-bola amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao. Etsy andaniny dia tsy misy ny fakana ny sazy ho an’ireo tsy mahaloa vola ara-potoana izay tsy mahafeno ny vola tokony haloa. Ho an’ireo izay tsy tonga mandoa mihitsy kosa dia misy ny taratasy natao hametrahan’ireo mpanjifa ny fepotoana eritreretina hahafahana mandoa ny trosa.